२२:१७, २१ अक्टोबर २०२१ जस्तै गरी पुनरावलोकन
९,५१२ बाइटहरू हटाइयाे , १ महिना पहिले
२२:०२, १९ अक्टोबर २०२१ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
२२:१७, २१ अक्टोबर २०२१ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
अतीतमा, जुन पुरा क्षेत्रलाई अहिले हामी "क्यालिफोर्निया" भन्दछौ, आजको क्यालिफोर्निया थिएन । तर पनि यसको दक्षिणमा रहेको मेक्सिन भूमिलाई पनि समेट्दथ्यो, त्यसैगरी नेवादा, Utah, र एरिजोना र Wyomingको केही भागहरू । जमीनको त्यो हिस्सा जुन अंततः [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को भाग थियो लाई स्पेनिस भाषिहरूले Alta क्यालिफोर्निया (माथि क्यालिफोर्निया) भने जब यो बाजा क्यालिफोर्निया (लोअर क्यालिफोर्निया) देखि विभाजित भएको थियो । यिनी प्रारम्भिक समयमा, कोरटेज र प्रशांत तटको सागरको सीमाहरूको राम्ररी ज्ञात थिएनन्, यसैले क्यालिफोर्निया एक द्वीप हो भनी पुरानो नक्सा गलत रूपमा देखाईयो । Las sergas de Espladián (Spladianको आनन्द)बाट नाम आएको हो , Garci Rodríguez de Montalvoले लेखेको १६ औँ शताब्दीको पुस्तक, जहां एक स्वर्ग द्वीपलाई क्यालिफोर्निया भनियो।
पहिले यूरोपीय जसले तटको केही भागको भ्रमण गरे, Rodriguez Cabrillo जुआन, १५४२मा पोर्चुगलबाट आए, क्रिस्टोफर कोलंबसले पहिले भ्रमण गरेको पचास वर्ष पछि । पहिले यूरोपीय जसले पुरा तट देख्यो उनी सर फ्रान्सिस ड्रेक थिए, १५७९ मा, र उनले निर्णय गरे कि ब्रिटिश यो स्वामित्व छ। तर १७००को पछिको शुरु देखी, रोमन क्याथोलिक चर्च ("मिशनरियों")को स्पेनिश धार्मिक नेताहरूले स्पेनिश राजा र रानीबाट उत्तरी बाजा क्यालिफोर्नियाको क्षेत्रमा ठूलो उपहार पाए। यो धार्मिक मानिसले साना शहर र गांउ बसाए, प्रसिद्ध क्यालिफोर्निया मिशन। जब मेक्सिको अब स्पेनको द्वारा नियन्त्रित भएको थिएन, मैक्सिकन सरकारले गांउहरू लियो, र उनीहरूले चाडै नै खालि गरायो।
[[चित्र:Lightmatter sanfrancisco.jpg|thumb|[[San Francisco]], California|३००px]]
१८४६ मा, मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध शुरू भएको थियो, क्यालिफोर्नियामा केही अमेरिकीहरूले एक क्यालिफोर्निया गणराज्य बनाउने आशा राखे। यि मानिसहरूले "भालू झण्डा" फहराए जसमा एउटा तारा सहितको एक स्वर्ण भालू थियो। यस गणराज्य अचानक समाप्त भयो, तथापि, जब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को नौसेनाको कमोडोर जन डी. Sloat सैन फ्रान्सिस्को खाडी तर्फ लागे। उनले भने कि क्यालिफोर्निया अब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को हिस्सा हो। मैक्सिको संगको युद्ध समाप्त भएपछी, क्यालिफोर्निया दुई देशहरूको बीच विभाजित गरिएको थियो। मेक्सिकन भाग Baja California (उत्तर) र Baja California (दक्षिण)को मैक्सिकन राज्यों बन गया. (स्पेनिशमा "बाजा"को अर्थ "तल्लो" हुन्छ।) [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को लागि दिईएको भागको पश्चिमी भाग क्यालिफोर्निया आज राज्य बन्यो।
१८४८ मा, आजको अमेरिकी तर्फको क्यालिफोर्नियामा लगभग ४,००० स्पेनिश बोलने मानिसहरू थिए (आज राज्यमा लगभग ४,००,००,०००को जम्मा मानिसहरू छन) । १८४९मा सुन अचानक पत्ता लागो र मानिसहरूको ठुलो संख्याका मानिसहरू त्यो प्राप्त गर्ने सुनौलो कुदाईको रूपमा धेरै तेजसंग त्यहा गए। १८५० मा, क्यालिफोर्निया सङ्घ ([[संयुक्त राज्य अमेरिका]])मा एक राज्य बन्यो।
अमेरिकी नागरिक युद्ध (१८६१-१८६५)को दौरान, क्यालिफोर्नियाको धेरै मानिसहरू, विशेष रूपमा दक्षिणी भागको क्यालिफोर्निया, दक्षिण सही छ भनेर सोचेका थिए। दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा केही मानिसहरू यध्यपी दक्षिणी क्यालिफोर्निया बाकी राज्यलाई छोडेर र महासङ्घ भएको अमेरिकाको राज्यमा शामिल हुन चाहान्थे। जबकी, यो भएन, क्यालिफोर्निया उत्तर (सङ्घ)को पक्षमा युद्धको प्रयासमा शामिल भयो र महासंघसंग लडन धेरै सैनिकहरूलाई पूर्व पठायो।<ref>http://www.drumbarracks.org/Original%20Website/California.htm</ref> सबभन्दा पहिले, पश्चिम र [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को पूर्वी तटको बीच यात्रा खतरनाक र धेरै समय लाग्थ्यो। भूमि मार्गद्वारा जानु धेरै मुश्किल थियो, किनकी त्यहा कुनै सडक र कुनै सवारी साधन थिएन, र धेरै मूल निवासी अमेरिकीहरू पश्चिम तर्फ लागि रहेका आप्रबासी अमेरिकीहरूको बग्गीमा हमला गरिरहेका थिए। केवल अन्य तरीका नाउ द्वारा यात्रा केप हर्नको आसपास , दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणी किनारामा भ्रमण थियो। यसले महिनौ लिन्थ्यो। किनकी यात्रा हजारौ मील लामो र पनामा नहर त्यस बेलासमा बनेको थिएन अर्को तर्फ। तर १८६९ मा, जोडिने काम राम्ररी चाडो भयो, किनकी महाद्वीपमा पहिलो रेल मार्ग पुरा भएको थियो। यस बीच, क्यालिफोर्नियामा अरु धेरै मानिसहरू जान्दै गहिरहेका थिए कि भूमि धेरै फल र अन्य बाली लगाउनको लागि राम्रो छ। सुन्तला खेती क्यालिफोर्नियाको धेरै भागमा भै रहेको थियो। यो विशाल कृषि व्यवसायको सुरुवात थियो जुन आज क्यालिफोर्नियामा छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/1040281" बाट अनुप्रेषित